Ungayongeza njani iwebhusayithi yam kwiAkhawunti yam yePinterest yeShishini? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 326
Ukuba uyinxalenye yoluntu lwentengiso, uyazi ukuba yintoni ukubaluleka kokwenza ulawulo kunye nokwazisa igama lakho Ngonxibelelwano lwasentlalweni, okwangoku enye yeqonga lenethiwekhi yoluntu elinika izibonelelo ngakumbi kwabo bazinikele kwintengiso kwiwebhu yiPinterest.
Esi sicelo kwiinguqulelo zayo ezimbini sinika uluhlu lweendlela ezizezinye zenoveli xa sineshishini elibonakalayo, oku uthotho lwemisebenzi Ukuba uyazi ukuba uzisebenzisa njani ngokufanelekileyo, ziya kukunceda ngendlela ebalulekileyo ekutsaleni abathengi abatsha kwaye kunjalo ekukhuleni kweshishini lakho. Emva koko, siza kukunika iingcebiso ezinokukunceda.
Enye yeenzuzo ezinkulu ukuba uneshishini elibonakalayo ekunika yona yile ube nakho ukuyilawula ngokufanelekileyoNgethuba nje uququzelele olu lawulo, hayi kuphela ngenxa yokuba ishishini liyinyani lithetha ukuba akufuneki ukuba ulazi yonke imihla, endaweni yoko, kufuneka ulazi yonke imihla.
IPinterest sisixhobo esiluncedo kakhulu xa kuziwa ulawulo lophawu kunye nokwazisa kunye neemveliso ezithengiswayo.
Ekuqaleni uneakhawunti yeshishini kwiqonga lePinterest, nje ukuba unephrofayili, ukuthengisa kule ntanethi, uya kuba nakho ukufikelela kwizibonelelo zayo. Indalo ilula kwaye inkqubo yePinterest iya kukuxelela inyathelo ngenyathelo kwaye ngendlela elula ekufuneka uyenzile.
Yongeza iPinterest kwiwebhusayithi yakho:
Esi sesinye sezibonelelo esizikhankanyile ngaphambili kwaye luluncedo olukhulu ngexesha lokuthengisa kwaye unako yenze ngeendlela ezimbini:
Lo msebenzi Kuya kufuneka uyikhuphe kwiPC yakho, inkqubo ilula. Into yokuqala ukungena kwiqonga lePinterest. Njengoko uhlala usenza, ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Khetha i icon ebonisa ukhetho lweemenyu, xa sele zibonisiwe, faka useto lweakhawunti kwaye ukhethe icandelo elijolise ekunxibelelaneni kwiwebhusayithi yakho, kwaye ucofe kwi icon yokudibanisa.
Yongeza idilesi Ithegi ye-HTML, ikope kwicandelo elihambelanayo kwaye cinezela uqhubeke.
Kwiwebhusayithi yakho yiya kwifayile kwaye ungeze ileyibhile apha, kuqala kwicandelo "eliyintloko" emva koko "emzimbeni".
Buyela kwiphepha lakhoUkusuka kwiPinterest, kwaye ukhethe ukhetho lokuthumela. Jonga ukuba yonke into ilungile nge-meta tag, ukuba kunjalo, iya kuthi iqhagamshele ngokuzenzekelayo kwiphepha lakho lewebhu.
Kule meko Inkqubo imi ngolu hlobo lulandelayo, ngenisa iqonga lePinterest. Njengoko uhlala usenza, ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Khetha i icon ebonisa ukhetho lweemenyu, xa sele zibonisiwe, faka useto lweakhawunti, khetha icandelo ukunxibelelana newebhusayithi, ukope idilesi yeHTLM kwaye ucinezele uqhubeke.
Ukulayisha ifayile Kwicandelo elinikezelwe kulo msebenzi, ukhuphele kwaye ucinezele uqhubeke.
Layisha ifayile kwakhona Ngeli xesha kwifolda yengcambu yeseva, buyela emva kwiqonga lePinterest kwaye uyithumele.
3 Yongeza iPinterest kwiwebhusayithi yakho:
4 Ifayile ye-HTML: